နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်သုံး – Billy Joel (The Stranger) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Music » နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်သုံး – Billy Joel (The Stranger)	24
နားဦးတည့်ရာ တစ်ဆယ့်သုံး – Billy Joel (The Stranger)
Posted by မြစပဲရိုး on Mar 15, 2015 in Music | 24 comments
“တစိမ်း” လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ ကိုယ် နဲ့ လုံးဝ မသိတဲ့ သူ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်နဲ့ သိပ်ပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း မရှိတဲ့ အခြေအနေ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဒေသ/အစားအစာ လိုမျိုး တွေ ကို ဆိုလိုတာ သိလိုက်ကြပါတယ်။
တကယ်တော့ “တစိမ်း” ဆိုတာဟာ အပြင် မှာ လူတစ်ယောက် လို အနေနဲ့တင် မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အတွင်း သဏ္ဍာန် ထဲ မှာလဲ ရှိနေပါတယ်။
The Stranger သီချင်း က ဒီ ရက်ထဲ စိတ် ဂယောက် ဂယက် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေ တွေ ကို ပြန်တွေးရင်း ညည်းတွားမိ နေခဲ့ တဲ့ နားဦးတည့်ရာ သီချင်းပေါ့။
သီချင်း ထဲ ကလို လူ တွေ ဟာ ကိုယ့်မှာ တစ်ခြား မျက်နှာဖုံး တွေ အများကြီး ရှိနေတာ ကို သတိမထား မိ ဖြစ်နေသလားဘဲ။
လူ တစ်ယောက်ဟာ သူ ပြောနေသမျှ၊ လုပ်ကိုင် နေသမျှ တွေ က တကယ် ဘဲ သူ့ပင်ကိုယ်လား။
သူ့မှာ တစ်ခြား အသွင်နဲ့ မျက်နှာဖုံး တွေ ရှိနေခဲ့တာ သူကိုယ်တိုင်တောင်မှ သတိမထား မိ နေတာ ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အသွင် မဟုတ်တဲ့ အဲဒီ မျက်နှာဖုံး တွေ က တစ်ခါတစ်ခါ ပေါ်လာတတ် တာ ကို ကိုယ်က အတင်း လျှို့ဝှက် ထားလိုက်တာ ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ကိုယ့်ဟာ ကို ကိုယ်မရင်းနှီးတဲ့ အသွင် ပြောင်း သွားမှာ ကို ကြောက်နေတာ ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ကိုယ့်စိတ် မဟုတ်တဲ့ တစိမ်း စိတ်မျက်နှာ တွေ ဖြစ်နေခဲ့လိုက်တာ ကို ဘယ်သူမှ မမြင်ရ အောင်ထားနေရတာ ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
ကိုယ် မသိတဲ့ တစိမ်း စိတ်မျက်နှာဖုံး ကို ပြောင်းကြည့်ဖို့ ကျွန်မတို့ ကြောက်ကြတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ တစိမ်း စိတ်မျက်နှာ က ထင်တာသလို မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင် လို ဖြစ်ချင်မှလဲ ဖြစ်မှာပါ။
မထင် တာထက် တောင် ပိုပြီး ကောင်းချင်ကောင်း တာ ဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်လာမှာပါ။
တစ်ခါတစ်ခါ ပုံသေ အတိုင်းဘဲ လုပ်နေ၊ တွေးနေတဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုး စိတ် မျက်နှာတွေ ကို ကိုယ်ကြောက်တတ်တဲ့ တစိမ်း စိတ်မျက်နှာ တွေ နဲ့ ပြောင်းကြည့် ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အပြောင်းအလဲ ဆိုတာ စိတ်သစ် လူသစ် မျက်နှာ အသစ် နဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကျိုး မပါ တဲ့ စိတ်စေတနာကောင်း အတွေးအမြင် သစ် တွေ နဲ့ ကျမတို့ အားလုံး ချစ် တဲ့ အဖ မြန်မာပြည် ( သူကြီး မင်း က ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အမိ မြန်မာပြည် လို့ တွေး) အနာဂါတ် ကောင်းမွန် တိုးတက် ပြီး မြန်မာ ဆိုတာကို ကမ္ဘာပေါ် မှာ လက်မထောင် ဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့ အချင်းချင်း ခွင့်လွှတ် ဖေးမ (သတိ – ဖင်မ မဟုတ်) ရင်း အာဃာတ အမုန်းတရား တွေ ဖယ်ပြီး အားလုံး ကြိုးစား ကြရအောင်ပါ။
* လေဖိအား များ တပ်ရင်း ဦးစီးချုပ်
You’ve done it why can’t someone else?
မြစပဲရိုး says: Billy Joel (The Stranger)
Well we all haveaface .. That we hide away forever .. And we take them out and show ourselves .. When everyone has gone
Some are satin .. some are steel .. Some are silk and some are leather
They’re the faces of the stranger .. But we love to try them on
မြစပဲရိုး says: ဒီ သီချင်းက ထူးအိမ်သင်ရဲ့ “တစိမ်းဆန်ဆန်” ရဲ့ မူရင်း ပါ။
ထူးအိမ်သင်ရဲ့ “တစိမ်းဆန်ဆန်” က ဒီ သီချင်း ရဲ့ ကော်ပီပါ။
ဒီ စကား နှစ်ခု ဟာ ကွာ တယ်လို့ ထင်ကြ ရဲ့လား။ ဒီမှာ ထူးအိမ်သင် ရဲ့ သီချင်းပါ။
မူရင်း က စန္ဒယား သံ နဲ့ စ ပြီး သူ့သီချင်း က လေချွန်သံ လေး နဲ့။
… .. … အလယ်မှာ စည်းခြားပြီလား ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာလားကွယ်
… .. … အချိန် တွေ နောက်လှည့်ပစ်ချင်သေး တယ်
… .. … အရင်လို ပြန် နေနိုင်မလားဟေ့ …
(တော်ပါတော့ နောက်ပြန် မလှည့်ကြပါ နဲ့တော့) lol:-))))
kai says: တစ်ခါတစ်ခါ ပုံသေ အတိုင်းဘဲ လုပ်နေ၊ တွေးနေတဲ့ ခေါက်ရိုးကျိုး စိတ် မျက်နှာတွေ ကို ကိုယ်ကြောက်တတ်တဲ့ တစိမ်း စိတ်မျက်နှာ တွေ နဲ့ ပြောင်းကြည့် ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လာမှန်းမသေချာတဲ့.. အနာဂါတ်ကိုရဲရဲလှမ်းဝံ့တာ.. လစ်ဘရယ်..။
လွတ်ပြန့်စွဲကြဟေ့.. ဒို့ဗမာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်ကဲ့ ပါရှင့် မဟာ ကွန်ဆားဗေးတစ် သူကြီးမင်း။ သို့ပေမဲ့ ရှင် သန်ရာ ဘက် ကို လှမ်းဆွဲဆောင် မယ် မတွေး နဲ့။ မလိုက်ဘူး။ lol:-))))
တိမ်မည်း says: အာဃာတ အမုန်းတရား တွေ ဖယ်ပြီး အားလုံး ကြိုးစား ကြရအောင်ပါ။
အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ အရီးရယ်။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာတွေက သိပ်များတယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဘီလီဂျိုဝယ်​လ်​ နား​ထောင်​သကိုး
ရစ်​ချီ ဆမ်​ဘိုရာ ​ကော မမြည်းကျိချင်​၀ူးလား
စတွိုင်းဂျား အင်​သစ်​စ်​​တောင်​ဂ့်း တပုဒ်​ထဲနဲ့
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: Billy Joel က Uptown girl မူရင်းအဆိုရှင်​လား
မြစပဲရိုး says: Yes. He is. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: နောက်ပိုင်း Westlife ပြန်ဆိုထားတာ။
Wo wo wooooo wooooo …
Arr ya… ya …ya .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: Westlife က ​တော့ အချစ်​​ဟောင်း​တွေမို့ အကုန်​ကြိုက်​။ဒါ​ပေမယ့်​ ပြန်​ဆို​တွေများ​နေမှန်းကြီးမှ သိသိလာတာ flying without wings ကလည်းပြန်​ဆိုပဲ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ma ti bu bya
Was this answer helpful?LikeDislike 12067
Alinsett@Maung Thura says: တစိမ်း ဆိုလို့.. မြန်မာ သတ်ပုံ မြန်မာစာ စကား မှာ…
ဒဇိမ်းလို့ အသံထွက်ပြီး သူစိမ်းလို့ ရေးတာလည်း တွေ့ဖူးတယ်။
သူတစိမ်း လို့လည်း တွေ့တယ်..
.ရေးတာရော …ဖတ်တဲ့အသံပါ…အတူတူပဲ ဖြစ်ပြီး တိကျ သေချာရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ…
ဘာသာ စကားဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေ အို…..အေးးးးးအေ့ ….အို…..
ဆက်အိပ် ဆက်အိပ်… ———————-
အားလုံးချစ် တဲ့ အဖ မြန်မာပြည် အနာဂါတ် ကောင်းမွန် တိုးတက် ပြီး မြန်မာ ဆိုတာကို ကမ္ဘာပေါ် မှာ လက်မထောင် ဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့ ….
ကျနော့်ကို ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား တန်ခိုးကြီးကြီးလေး.. ညွှန်ကြပါဦး..
မြစပဲရိုး says: မောင်တိမ်မည်း
စိတ်ဆိုတာ ပြောင်းဖို့ သင့်ရင် ကြိုးစားပြောင်း ကြည့်ရမှာပါ။
မလွယ်တော့ မလွယ်ဘူးပြောနိုင်ပေမဲ့ ပြောင်းမဲ့ သူ ရဲ့ ပညာဉာဏ် အတွေးအခေါ်ပေါ်မှာ တည်ပြီး ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားလိုစိတ် ပေါ်ပါတယ်၊
ပြောင်းဖို့ အဆင့်မမှီဘူး ထင်ရင် ပွဲ ထဲ က ထွက်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ။
အခုချိန်မှာ တစ်ကိုယ်ရည် ခံစားချက် တွေ က အများ ကို အနှောက်အယှက်ပေးနေတော့ တာ။
အများက လဲ ရိပ်မိ လာပြီမို့ သူတို့ မပြင်နိုင်ရင် သူတို့ ကို ထုတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ မောင်ဂီ
ရစ်​ချီ ဆမ်​ဘို မကြားဖူးဘူး။
တစ်ခြားသီချင်း တွေ ကိုပါ ဆက်ဖွလိုက်တော့ သူ့ကြည့်ရတာ ခရစ်ယာန်သီချင်း ဆိုသူများလားဘဲ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရူပါကတော့ ဖြောင့်သားကိုး။ ဆက်ဆက်
မင်း ရဲ့ ရင်ထဲ မှာ မင်း ဆုတောင်း ကို ပြည့်စေမဲ့ ဘုရား ရှိနေတာ ကိုလေ။
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် မှာ သူစိမ်း / တစိမ်း နှစ်မျိုးလုံး ကို Stranger လို့ ဖော်ပြထား တယ်။
မဆိုးပါဘူး။ Flexible ဖြစ်ပါတယ် ဆက်ဆက် ရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အရီး
သည်​ဘက်​မှာ​တော့ ခီညားထမင်းစားတာ ကျုပ်​ဆွမ်း​တော်​တင်​သ​လောက်​ ရှိတာမုိ့
မြစပဲရိုး says: မှန်ပါဖျာ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
Courage says: ရေးဖူးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် သတိရမိသွားလို့ တင်လို့တာ စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ဒေါ်လေးမြ
ငါနှင့်ငါကြား ၊ ငါကခြား၍
ငါ့ကိုငါအမြဲ ၊ ရှာသော်မတွေ့လဲ
ကြိုးစား၍သာ ၊ ငါဆက်ရှာမည်
တစ်နေရာဆီ ၊ ငါရှိသည်။”
ကိုငှက်ရဲ့ တစိမ်းဆန်ဆန်ကိုတော်တော်ကြိုက်ခဲ့တာ။ Billy Joel ရဲ့ The Strangerနားထောင်မိတော့ သူစားသားတွေကို ပိုကြိုက်သွားတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
မြစပဲရိုး says: ဘာလို့ စိတ်ဆိုးရမှာတုန်း။
ကိုယ်ပိုင် ကဗျာလေး အတွက် အစိမ်းချယ်ပေးပါတယ်။
တကယ်တော့ ငါ တွေ က ပုံစံမျိုးစုံ ပြောင်းပြောင်း နေတာ ကို မဟုတ်သယောင် ဟန်ဆောင် နေကြရတာလေ။
ဦးကြောင်ကြီး says: မှံအိ.. ဒါကြောင့် အချို့ မြန်တျန့်မတွေ ပေါဒါ.. လစ်ဗင်းတူဂဲဒါ မြန်တျန့်နဲ့မထား.. ဒဇိမ်း လူမျိုးခြားနဲ့ ထားအိဒဲ့.. များဒေါအားဖြင့်တော့ အဖြူ မယပါဘူး… ပဲနဲ့အမည်း ဖျစ်ကုံဒါမြားအိ။ မြန်တျန့်ထီးကြတော့ ပဲမ၊ အမည်းမဂတောင် ဆိတ်မဝင်ဇားတော့ အရိုးကိုစည်းရိုးထိုး ကိုယ့်အမြိုးပဲ ခြစ်ပြရတာပဲ.. ခွီး..
ခင်ဇော် says: ကိုယ်မှာ မျက်နှာဖုံးတင် မက မျက်နှာတွေလည်း အများဂျီးရယ်။
pooch says: ၂ ပုဒ်လုံး ဒေါင်းနေတယ် အခု
အသက်ကလေးရလာတော့ မျက်နှာဖုံးတွေ မဖြစ်မနေ တပ်မှ တပ်ရတဲ့အနေအထားရှိလာတယ်
တပ်ရင်းနဲ့ ခွာမရတော့တာတောင် ရှိတယ်
အဲ့ဒါကိုကပဲ အတွေ့အကြုံခေါ်သလား ရင့်ကျက်မှုခေါ်သလားပဲ စိမ်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာဖုံးဆိုသော်ငြား ရွေးချယ်စရာမရှိအောင် ဖြစ်နေမှတော့ အံဝင်အောင် ကြိုးစားတပ်ရမှာပေါ့
Mr. MarGa says: သူစိမ်း ဟုတ်လား!
အရင်းအချာ ဆိုတာ ဘယ်မှာရှိသတုန်း
မိသားစု ဆိုတာတောင် သူစိမ်းနှစ်ယောက်က အစပြုလို့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပေဘူးလား
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့် ကိုယ် တောင် တစ်ခါတစ်ခါ သူစိမ်းတွေဖြစ်နေတာပဲကို
naywoon ni says: xenophobia က​တော့ နိုင်​ငံခြားသားကို​ကြောက်​တာတဲ့ ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲရမှာ ​ကြောက်​တာကျ​တော့ ဘယ်​လို​ခေါ်မလဲ ???
ခင်ဇော် says: Fear of Change Phobia – Metathesiophobia
black chaw says: အစ်မရေ…။
မဆီမဆိုင် စကား အတင်းစပ်ပါရစေ…။
Gerard Joling ဆိုတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ကို ညွှန်းပါရစေ…။
သူ့သီချင်းကို မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ဆိုတာ တစ်ပုဒ်ပဲ ကြားဖူးတယ်ခင်ဗျ…။
စကားလုံးမရှိတဲ့ ကောင်းကင် ၂ သီချင်းရဲ့ မူရင်းအဆိုတော်ပါ…။
We don’t Have to say the word သီချင်းပါ…။
မူရင်းကို နားထောင်ထားရင် ထူးအိမ်သင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ အရသာရှိမယ်မဟုတ်ပါ…။
အခု အစ်မကို နားထောင်စေချင်တာက
Hearts on fire သီချင်းပါ…။
နားထောင်ဖြစ်အောင် နားထောင်ကြည့်စမ်းပါ အစ်မရယ်…။
ကျွန်တော် ကြိုက်လွန်းတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်မို့ပါ…။